Wasiirka Arimaha Dibada Somaliya Oo Dalalka Caalamka Ugu Baaqday In Ay Maal-gashi Ku Sameystaan Somaliya | Salaan Media
Home Wararka Wasiirka Arimaha Dibada Somaliya Oo Dalalka Caalamka Ugu Baaqday In Ay Maal-gashi...
Aug 3,2013 Muqdisho(SM) Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ahna wasiiradda arrimaha dibadda, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ugu baaqday dalalka caalamka inay maal-gasho ku sameystaan Soomaaliya, kaddib isbedel dhinaca ammaanka ah oo ka dhacay sida ay ku sheegtay wareysi ay siisay wakaaladda wararka Shiinaha ee Shinwaa.
Fowziyo ayaa sheegtay in falalkii burcadbadeednimo ee xeebaha Soomaaliya ka dhici jiray uu hoos u dhac ku yimid, lana wiiqay awooddii argagaxisada, taasna ay dhiirri-gelin u tahay ganacsatada caalamka inay Soomaaliya maal-gashi ku sameystaan, maadaama uu hodan ku yahay khayraadka dabiiciga ah.
Fowziyo oo Nairobi kula hadashay wakaalada wararka ee dalka shiinaha (Shinwaa) ayaa sheegtay in dalka soomaaliya uu leeyahay laba dhibaato oo kala ah burcadbadeedda iyo argagaxisada.
Wasiiradda ayaa intaasi ku dartay in 80% ay hoos u dhaceen falalkii burcad-badeednimada marka loo eego labadii sano ee lasoo dhaafay, waana horumar la gaaray ayay hadalkeeda ku dartay. Waxay kaloo xustay in laga gaaray horumarro dagaallada lagula jiro Al-shabaab, iyadoo taageero ay ka geysteen ciidamada AMISOM iyo Midowga Yurub oo dhaqaalaha bixiyay.
“Hadda inta badan dhallinyarada da’da yar waxay billaabeen inay Al-shabaab isaga soo tagaan, taasoo ku keentay niyadda iyo dhaqaale la’aan, waayo innagu waxaan kala wareegnay dhul ballaaran,” ayay wasiiraddu hadalkeeda ku dartay.
Fowziyo ayaa sheegtay in maadaama uu ammaanka dib u soo laabtay in Soomaaliya ay u baahan tahay dalka Shiinaha oo kale ah oo ka caawiya sidii dib loogu dhisi lahaa dalka, gaar ahaan kaabayaasha bulshada, gaar ahaan waddooyinka, iskuullada, isbitaallada iyo wixii la mid ah, kadib 22-sano o colaado ah.
Wasiiradda ayaa ugu dambeyntii sheegtay in maalgashadayaasha caalamka ee doonaya inay Soomaaliya yimaadaan si ay maalgashi ugu sameystaan ay soo dhaweynayaan ayna sida ugu dhaqsiyaha badan ku imaan karaan, iyagoo heli doona ammaan ku filan.